Banyere Anyị - Beijing JCZ Technology Co., Ltd.
Beijing JCZ Technology Co., Ltd. nke a maara dị ka JCZ hiwere na 2004. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ a ma ama, raara nye nnyefe ọkụ laser na njikwa metụtara nyocha, mmepe, imepụta, na mwekota. E wezụga ya isi ngwaahịa EZCAD laser akara usoro, nke bụ na-eduga ọnọdụ na ahịa ma na China na mba ọzọ, JCZ na-n'ichepụta na-ekesa dị iche iche laser metụtara ngwaahịa na ngwọta maka uwa laser usoro integrators dị ka laser software, laser njikwa, laser galvo nyocha, isi iyi laser, laser optics ... Ruo afọ 2019, anyị nwere ndị otu 178, ihe karịrị 80% n'ime ha bụ ndị ọrụ aka nwere ọrụ na R & D na ngalaba nkwado teknụzụ, na-enye ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya ma na-anabata nkwado teknụzụ.
Na anyị mbụ na klas mmepụta usoro na echesinụ àgwà akara n'oge dum mmepụta usoro, niile na ngwaahịa bịarutere anyị ahịa ụlọ ọrụ ndị fọrọ nke nta efu ntụpọ. Ngwaahịa ọ bụla nwere nyocha nke aka ya, naanị ngwaahịa JCZ rụpụtara, mana nke ndị mmekọ anyị mepụtara.
Na JCZ, ihe karịrị 50% nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba R & D. Anyị nwere otu ndị ọrụ igwe eletriki, igwe, ngwa anya, na ndị injinia sọftụwia ma tinye ego n'ọtụtụ ụlọ ọrụ laser ama ama, nke na-enyere anyị aka iweta azịza zuru oke maka mpaghara nhazi ọrụ laser n'ime obere oge.
Site na ndị otu ọrụ nkwado aka ọrụ anyị, enwere ike ịnye nkwado ntanetị site na 8:00 Am ruo 11:00 Pm UTC + 8 site na Mọnde ruo Sọnde. Nkwado ntanetị 24 ga-ekwe omume mgbe JCZ US ụlọ ọrụ guzobere n'ọdịnihu dị nso. Ọzọkwa, ndị injinia anyị nwere Visa ogologo oge maka mba ndị dị na Europe, Aisa, na North America. Enwere ike ịnweta nkwado saịtị.
Ngwaahịa JCZ nọ n'ọkwá na-eduga n'ahịa ahụ, karịsịa maka akara laser, a na-erekwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akụkụ laser (50,000 set +) kwa afọ. Dabere na nke a, maka ngwaahịa ndị anyị mepụtara, ọnụahịa anyị na-eri bụ nke kachasị dị ala, na maka nke onye ọlụlụ wetara, anyị na-enweta ọnụahịa na nkwado kachasị mma. Yabụ, ọnụ ahịa asọmpi nke JCZ nwere ike ịnye.
Afọ AH YEMARA
AH EMR EM ND EM ỌR EX
R&D NA NKWADO ENLỌ
Ndị ahịa ụwa
Anyị malitere nkwado na JCZ na 2005. Ọ bụ obere ụlọ ọrụ n'oge ahụ, naanị mmadụ iri. Ugbu a JCZ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama na mpaghara laser, ọkachasị maka akara laser.
- Peter Perrett, Laser system integrators nke dabere na UK.
N'adịghị ka ndị ahịa ndị ọzọ nke China, anyị na ndị JCZ mba, ndị ahịa, R&D na ndị injinia nkwado na-enwe mmekọrịta chiri anya. Anyị zutere ọnwa abụọ maka ọzụzụ, ọrụ ọhụrụ, na ị drinkingụ mmanya.
- Mazi Kim, onye guzobere ụlọ ọrụ sistemụ laser nke Korea
Onye ọ bụla nọ na JCZ Amaara m na ọ na-eme ihe n'eziokwu ma na-etinye mmasị ndị ahịa mgbe niile. Mụ na ndị otu mba mba JCZ na-azụ ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 ugbu a.
- Mazi Lee, CTO nke otu ụlọ ọrụ sistemụ Korea laser
EZCAD bụ sọftụwia mara mma nke nwere ọrụ dị ike yana mmekọrịta enyi na enyi. Ndi otu nkwado na-enye aka mgbe niile. Naanị m na-agwa ha okwu m, ọ ga-edozi n'ime obere oge.
- Josef Sully, onye ọrụ EZCAD nke dị na Germany.
N'oge gara aga, azụrụ m ndị na-achịkwa JCZ na akụkụ ndị ọzọ site na ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ. Ma ugbu a, JCZ bụ naanị m soplaya maka laser igwe, nke dị oke ọnụ-arụ ọrụ. Nke kachasị mkpa, ha ga-anwale akụkụ niile otu oge ọzọ tupu ebupu iji jide n'aka na enweghị nkwarụ mgbe ọ bịara n'ọfịs anyị.
- Vadim Levkov, Onye na-arụ ọrụ sistemụ laser na Russia.
Iji kpuchido nzuzo nke ndị ahịa anyị, aha anyị ji mee ihe bụ nke mebere.